Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Solowheel The: hubi this nidaam cusub giratory” waxaa qoray Kit Buchan, ee Observer ayaa Isniintii 8th December 2014 13.03 UTC
"Nin kii Eebuu ku wheel hore ayaa ahaa doqon ah,"In aan soo xigto majaajiliiste soo daahay Sid Kaysar, "Wiilkaan oo been abuurto saddexda kale: uu ahaa hanad ka!"Waxay raacsan iyadoo markan of view waa habdhaqanka dabiici ah dadka cusub in ay ka Solowheel, oo aan caadi ahayn ah, mid ka mid taayir baabuur ay diyaariyeen hindisa Maraykanka Shane Chen. Waa, on kormeer ugu horeeyay, a monstrously culus, shandad wareeg ah, qiyaastii nus mitir oo dherer, bixiya wax sansaan gaadiidka wax kasta oo.
Si aad tijaabada Marexaan, Si kastaba ha ahaatee, Solowheel waa ka duwan xarrago leh oo ku habboon in baaskiilka, mooto ama Segway, ay qaraabo dhow. Nasiib ayaan u lahaa oo ku filan si ay u helaan waxbarashada saacad badhkeed ah ka Ray Brook, nooc ka mid ah wax wacdiyi jiray iskaa wax u qabso ee Solowheel kii, at 68, taagan dardaaran ku nool nooca qaar ka mid ah guryaha anti-gabowga qarsoon ee Howlaha ay. Waxaa hubaal ah in, tan iyo markii uu helay mishiinka, uu si dirqi ah cag dhigo dhulka adag; bixideedu, halkii, iyada oo nolosha la Nuuruddiin Faarax saw, lugihiisa iyo weligoodba negaanaya baalasheeda mataanaha ah Solowheel ah.
Dhagno gacanta Brook ee sida seabird a joogsaday qabato a gabiga-fool ah, Waxaan keentay agagaarka in xayndaab lagu infernal ee cidhifka sherkadaha Square, London, halkaas oo ardaydu tahay guryanta aflagaada engegaan sidii ay u gudbin. "Waxaan sii dhaadhacayeen, Ray, Waxaan ka hartay,"Waxaan waakanaa, hubka aan booska in siddooyinka kuwa aan cibaadada lahayn, oo isna wuu ii soothes la ereyo dhiirin. Motor wheel ee, waxa uu ii sheegayaa, waxaa dhisay hareeraha a "gyro-ku biiro", taas oo ay jawaab u tahay qaybinta culayska guud ahaan wheel ka. Weeraryahanka jiir, iyo motor ku dedejisaa; jeesataa, oo waxay yareysaa.
By qiyaasaha qaarkood, 20 daqiiqo waa dhan aad u baahan tahay si ay u noqdaan si raaxo leh madax banaan fuulaan giraangirta: qiyaastay kaliya waxaan kibir ayaa sameyn karaa lissom, caag-limbed meeshu-dad la mustaqbalkooda dheer ku seegaan Gadaashoodana. I dhaqma fiid kasta muddo todobaad ah oo hadda ka dhigi kartaa markooda xaq-xagal Isbedelka, iyo ugu yaraan kortaan karaa wax oo aan gargaar ka derbi ama jaalle ah. Xanuun badan sida ay haatan tahay, Ayaan waxaan ku khasbanaaday in ay aqbalaan in aan ka mid ahaa shaqaalaha yaraan bilicsan oo ka mid ah xiro, Observer. Kaaliyaha editor ee, iyada Gelitaankii koowaad, galayo guud ahaan Soomalaiya sida caleen oo guud ahaan balli. The xawaare editor muuqaallo kale ay weheliyaan kanaalka, pint ah Amstel ee hal gacan. Editor ayaa xilsaartay on dheeri this xaajooday geeska ah aan awoodi karo, inkastoo dharka habeenkii dabaqa-dhererka iyada lagu xirto u xaflad lagu Association Dibadda ee Press.
Laakiin waxaan ku xayiran waxaa la, ma aha oo kaliya baxay waajibkeenna mihnadeed ama daacad u Brook, laakiin sababtoo ah marar kooban oo xasiloonida iyo taxadirayo, kaas oo inta lagu guda jiro dhaqanka waxaa lagu qanciyo ka sii. Taag wheel ka wada aamusan, dabaysha iyo hilaaca qoorteeda, Waxaan dareemay in aan soo bidhaamaysa yaabaa mustaqbal ifaya ee boulevards doorsoomaynin, kooxaha ka mid ah tirooyinka taayir timi ee la soo dhaafay, isweydaarsiga bons keywords iyo vaping. Waxay ahayd aragti unbaana, gaaban joojiyay markii aan soo maratay galay xayndaabka lug eey.